lundi, 18 janvier 2021 11:01
Ampihaviana-Antsirabe : Potika ilay fiara kely 205 GTI, vokatry ny fandehanana mafy
Fiara Peugeot 205 GTI iray no nifatratra tamin’ny andrin’ireny tambazotram-pifandraisana ireny ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady tokony ho tamin’ny 2 maraina tany ho any, teo Ampihaviana-Antsirabe. Mafy ny dona ka nipitika any amin’ny 15 metatra any ilay fiara kely ary nivadibadika raha ny fahitana ny fahavoazana aminy. Naratra mafy avokoa ireo olona tao anatiny raha ny filazan’ireo nanatri-maso, saingy tsy voafaritra mazava ny isany. Mpitari-posy iray no nijoro vavolombelona fa hitany nivezivezy eran’Antsirabe ity fiarakely ity nanomboka tany amin’ny 11 ora alina tany ny sabotsy, ka lehilahy rasta no namily ny fiara niaraka tamina vehivavy vitsivitsy tao anatiny.
samedi, 16 janvier 2021 19:21
Gadra nitsoaka ny fonjan’i Farafangana : Voasambotra i Marolahy, dimy volana taty aoriana
Voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny « Poste Fixe » Anosivelo, Distrikan’i Farafangana, nandritra ny fisafoana nataon’izy ireo, ny harivan’ny alarobia 13 janoary 2021, i Marolahy. Iray tamin’ireo voafonja niisa 88 nitsoaka nandritra ny fahavakisan’ny fonjan’i Farafangana ny alahady 23 aogositra 2020 ity farany. Halatra vola 670 000 Ar narahina herisetra no nidiran’i Marolahy ny fonjan’i Farafangana ny 29 desambra 2018. Notsaraina izy ny 03 jolay 2019 ary voaheloka higadra an-tranomaizina dimy taona sazy mihatra. Natolotra ny fampanoavana ny Fitsarana ambaratonga voalohany Farafangana i Marolahy, ny 15 janoary 2021, ary naverina am-ponja. Mbola misy 16 ireo voafonja karohina amin’izao. Nampanantena valisoa 2 tapitrisa Ariary isaky ny gadra voasambotra moa ny fanjakana, ho an’izay olona manome loharanom-baovao ahazoana misambotra ireo voafonja nitsoaka ireo.
Sary : Rainer Dolch
Ny 8 janoary lasa teo no nanatanteraka fivoriam-be farany narahina fanaovan-tsonia ny mponina any Betsiaka Ambilobe. Mangataka amin’ny fanjakana sy ny ONG Fanamby izy ireo hitrandraka volamena any amin’ny toerana tsy lavitry ny faritra arovana Andrafiamena Andavakoera. Tany mangadihady izy io, fa ny ala fady izay ao anatin’ny faritra arovana tantanin’ny ONG Fanamby kosa dia eo amin’ny 500 metatra miala eo no misy azy. Manankarena zavamaniry sy biby tsy fahita firy izany ala izany ka mahasarotiny ny fitondrana ny fiarovana azy.Nirongatra be ny fitrandrahana volemana manakaiky izany faritra arovana izany ny volana desambra teo.An-jatony aman’arivony ny mpitrandraka madinika nirohotra tany. Nandefa miaramila sy zandary ary polisy ny fitondram-panjakana nandroaka azy ireo.
Mpifindra monina avy any Amboasary Atsimo sy Ambovombe Androy mitotaly 285, nahitana ankizy 75, vehivavy 42, lehilahy 168, no tafajanona teo Kelivondraka, amin'ny sampanan'ny RN13 sy RN7 ny 12 janoary 2021 teo. Nandositra ny haintany sy hanoanana any atsimo izy ireo, ka najanon'ny fiara nitondra azy ireo teo, fa hafindra amina fiara hafa. Nandray andraikitra ho fanampiana azy ireo ny Goverinoran'ny faritra Ihorombe, niaraka tamin'ny Talem-paritry ny mponina, ny lehiben'ny Zandary tao an-toerana nanolotra sakafo miampy ny trano lay iray lehibe an'ny BNGRC nialofan’izy ireo. Afaka niainga ny 13 janoary 2021 folak'andro ny ampahany voalohany, ary omaly atoandro no niainga tao Ihosy ny 130 andiany farany tamin'izy ireo hiazo an’Antananarivo. Nanambara ny Governora fa tsy azo ekena intsony ny fanaovana “transbordement” toy izao ao Ihorombe, fa tsy maintsy ataon'ireo mpitatitra tonga hatrany any amin'izay toerana hitodiany ny mpandeha entiny, mba hitandrovana ny fahasalamana sy ny fandriampahalemana.
Amparafana-Mahanoro : Velaran’ala 35 Ha no may
Velaran-tany 35 ha no may tao amin'ny alan'Amparafana, Distrikan'i Mahanoro ny alarobia teo. Niara-nientana tamin'ny famonoana ny afo ny Fokonolona, ireo mpitandro ny filaminana, ireo tompon'andraikitra ao an-toerana ary ny ekipan'ny lehiben'Ala ao Mahanoro. Efa miroso amin'ny fanadihadiana mahakasika ity fahamaizana ity ireo tompon'andraikitra ankehitriny. (Jereo Sary Tohiny)
Antsanga-Antsirabe : Jiolahy nirongo basy nanafika trano fivarotana, olona roa no naratra mafy
Tsy mandry fahalemana eto Antsirabe tato ho ato na misy aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, saingy tsy mahasehaka izany izy ireo. Nisehoana fanafihana mitam-basy teny amin’ny Fokontany Antsanga-Ambohimanabe, eto Antsirabe ambonivohitra ny alin’ny alahady teo. Vola 20 tapitrisa no lasan’ireo jiolahy, ary olona 4 no nodarohan’izy ireo, ka ny 2 no tena naratra mafy. Toeram-pivarotana zava-pisotro, manamorona ny làlam-pirenena faha 34 mivoaka an’Antsirabe, akaiky an’Andraikiba ity voatafika ity. Raha ny fanazavana azo avy any an-toerana, dia tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina no tonga ireto andian-jiolahy ireto. Mbola nisy olona nisotro teo amin’io toerana io tamin’izany, fa tsy nisy nanam-po mihitsy kosa, fa ireo jiolahy efa teo am-pivarotana toy ny mpanjifa rehetra. Tampoka nefa dia nanapoaka basy ny iray tamin’izy ireo, ary teo vao samy taitra ny rehetra, satria noheverina ho olona mpanjifa ihany ireto jiolahy ireto.
Nihitatra tany amin'ny grevin'ny mpianatry ny Onivesité n'Antsiranana ny fitokonanana nataon'ny mpianatra ENSET omaly alakamisy 07 janoary 2021. Nifamotoana teny amin’ny campus ny mpianatra omaly hariva. Mitaky ny fisian'ny rano eny amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra izy ireo, ny hanatsarana ny trano izay tsizarizary. Niitatra hatrany amin’ny fitakiana ny fialan’ny filohan’ny oniversite ny tapak’ireo mpianatra io hariva io. Nisy anefa ny sakoroka, nisy ny fisamborana mpianatra 16 ary dia nanararoatra ihany koa ireo totakely nanimba sy nangalatra.May tamin'izany ny fiara iray, vaky ny fitaratry ny biraon'ny Filohan'ny Oniversité, nidiran'izy ireo ny biraon'y DAF, mpitam-bola, nisy nangalatra ny imprimante sy ny ordinateur, nopotehina ny birao.
vendredi, 08 janvier 2021 11:37
Ambatondrazaka : Rangahy 50 taona voasambotra nanolana zazavavy 06 taona
Zazavavikely vao 06 taona monja no fantatra fa tratry ny fanolanana nataona rangahy iray 50 taona, “maçon”, tao Antanifotsy Ambatondrazaka, Alaotra-Mangoro ny 05 janoary 2021. Sendra tsy teo ny renin'ilay zaza no nanararaotra nanao ny filan-dratsiny ilay “maçon”, izay manao trano mifanila aminy. Rahefa tonga ilay Renim-pianakaviana dia nahatsikaritra rà mikoriana amin'ilay zaza ka nitoroka tamin'ny Zandarimaria avy hatrany. Araka ny famotorana fohy dia notondroin'ity zaza voaolana ity tsy ampihambahambàna ilay rangahy izay nanolana azy. Mitohy ny famotorana saingy mbola raiki-tahotra ilay zaza izay nampitahorin'ilay rangahy fa ho vonoiny raha mitoroka sy mitantara ny fisehoan-javatra. Efa manaraka fitsaboana sahaza azy ao amin'ny CSB2 Ambohimasina ilay zazavavy kely voaolana.
jeudi, 07 janvier 2021 11:22
Volamena 73,7 kg : Nitory ny fanjakana malagasy, tsy maintsy haverina eto an-tanindrazana ny entana sy ireo mpanao hosoka
Nitory ny fitondram-panjakana tamin’ny fanondranana an-tsokosoko ilay volamena milanja 73,7kg nakany ivelany. Tsy maintsy atao ny fomba rehetra hamerenana io volamena io ao amin’ny Banky Foibe eto Madagasikara. Ary hiroso tsy ho ela ny fitsarana ity raharaha ity eny anivon’ny PAC na ny Pôle Anti-Corruption. Hohenjehina ary hiharan’ny sazy ireo rehetra izay mikasa ny hanelanelana na hisakantsakana amin’ny fanatanterarahana izany fampodiana azy ireo izany eto an-tanindrazana. Tsy maintsy hampiharina ny lalàna. Hijoro tsy ho ela ny « Agence de recouvrement des avoirs illicites » araka ny efa voafaritra ao anaty didy hitsivolana mikasika izany.
mardi, 05 janvier 2021 07:58
Zandary Bembary : Fanomezana faran’ny taona hafa kely
Noraisina ny angady sy ny lapelina ary ny boreta mbamin’ny sihoa miaraka amin’ny simenitra sy ny fasika ary vato. Indro ireo zandary avy ao amin’ny tobinjanam-paritra (poste avancé) aty Bembary Gara (MLA), Moramanga, fa rafitra nanentsin-davaka tamin’iny lalam-pirenena faha-44 mankany Alaotra iny. Mialoha ny fiafaran’ny taona 2020 teo no nitrangan’izany.Nahazo baiko avy tamin’ny ny jeneraly Andrianjanaka Lanto, izay Komandin’ny Zandriamariam-pirenena izy ireo. Tsikariny ho misy lavaka ahiana hitera-doza eo amin’ny fidirana atsimon’ny “radier” mialoha ny hamakivakiana ny tanànan’i Mandrota. Lalovany matetika izany lalana izany, ka hitany tsara, ary dia niafara tamin’ny fanomezana baiko izay, nandritra ny fandalovany taty an-toerana. Nandray andraikitra avy hatrany, noho izany, ny zandary tao ao amin’ny tobinjanam-paritr’i Bembary ka nanamboatra vonjimaika tamin’ny alalan’ny fanotofana "béton" ny lavaka.
Page 4 sur 223